ရန်ကုန် | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း မှ | MyJobs
Result page 1 for ရန်ကုန် ရှိ သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း မှ
အလုပ် 32 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
Junior Accountant ,AR
Junior Account, AR is responsible for overall under Account Receivable and GL with other assignment from Accounting Officer and Accounting Manager
Recruitment Officer is responsible to fill our open positions with qualified candidates.
Drivers are responsible for safe transport inatimely manner, working on nights and weekends and ensuring that vehicles are always ready for use.
ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး အလုပ်အကိုင်များ6စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ5ဆော့ဗ်ဝဲ နှင့် အချက်အလက် ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ2ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ4ဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 ယာဉ်မောင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န််််ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ 1 ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ2လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ2အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ4အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 4
စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ2အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား 29